ပြင်ပအီးမေးလ်အရောင်းအ ၀ ယ်သည်သင်၏စျေးကွက်ရည်မှန်းချက်ကိုမည်သို့အထောက်အကူပြုနိုင်မည်နည်း Martech Zone
သင်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်သို့အသွားအလာကိုသင်မောင်းနှင်သည်။
သင်အသွားအလာအချို့ကိုပြောင်းလဲပြီးသင်၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုရောင်းသည်။
အမှန်မှာ၊ ပထမစာမျက်နှာမှဂူဂဲလ်ရလဒ်ရရန်နှင့်အော်ဂဲနစ်အသွားအလာကိုမောင်းရန်ယခင်ကထက် ပို၍ ခက်ခဲသည်။
ဒါကြောင့်သင်လည်းအ ၀ င်အထွက်စျေးကွက်ဟာမလုံလောက်သေးဘူးဆိုတာသတိထားမိရင်သင်ရလဒ်ကောင်းတွေရဖို့ထပ်မံတွန်းအားပေးရမယ်။
အပြင်မှာအီးမေးလ်အရောင်းအ ၀ ယ်ရောက်လာတယ်။
ပြင်ပအီးမေးလ်အရောင်းအ ၀ ယ်သည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုအထောက်အကူပြုနိုင်သောမြင့်မားသောပစ်မှတ်ထားသောလူများထံရောက်ရှိရန်ဖြစ်သည်။
ထောင်နှင့်ချီသောလူတို့အားတူညီသောမက်ဆေ့ခ်ျကိုလွှင့်ပစ်သည့်သင်၏ပုံမှန်အီးမေးလ်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်၎င်းထက် ပို၍ ရှုပ်ထွေးပြီးဗျူဟာကျသည်။
မှန်ကန်သောနည်းပရိယာယ်များ၊ အပြင်ထွက်အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး သင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏မြင်သာမှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်သင်၏စီးပွားရေးအတွက် ဦး ဆောင်ခြင်းများကိုပြုလုပ်ရာတွင်အလွန်ထိရောက်နိုင်သည်။
ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ် tool တစ်ခုအသုံးပြုခြင်း ရေနံချောင်း၊ ၎င်းသည်အီးမေးလ်ထိတွေ့မှုအတွက်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားခြင်းဖြင့်သင့်အားအထူးပြုလုပ်ထားသောအီးမေးလ်များကိုပရိသတ်အနည်းငယ်ဆီသို့ပေးပို့နိုင်ပြီး၊ နောက်ဆက်တွဲအစီအစဉ်များကိုထူထောင်နိုင်သည်။ သင်၏အလားအလာများနှင့်ဆက်သွယ်မှုအားလုံးကိုခြေရာခံနိုင်သည်။
OutreachPlus 14 နေ့အခမဲ့ရုံးအတွက်စာရင်းသွင်းပါ
Link တည်ဆောက်ခြင်းစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများသည်မျက်နှာစာနှစ်ခုတွင်အလုပ်လုပ်သည် - သူတို့သည် SEO အတွက်အလွန်အရေးကြီးသောမတူညီသော link profile တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ရန်သင့်အားကူညီသည်။ သင်၏ website သို့အရည်အသွေးမြင့်အသွားအလာကိုသယ်ဆောင်ပေးသည်။
link တည်ဆောက်မှုနည်းဗျူဟာများစွာရှိသည်။ သို့သော်အလွန်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သောအနည်းငယ်ဖြစ်သည်။
အခမဲ့လင့်များ - သက်ဆိုင်သည့်ကွန်ရက်စာမျက်နှာများပေါ်ရှိဆောင်းပါးများကိုရှာ။ လင့်ခ်များကိုလဲလှယ်ပါ။
ဆက်သွယ်မှုပျက်နေပါတယ် - မြင့်မားသောအာဏာရှိသောဆိုဒ်များကိုတူရိယာတစ်ခု သုံး၍ ကျိုးပဲ့နေသောလင့်ခ်များကိုရှာဖွေပါ Ahrefs နှင့်အစားထိုး link ကိုကမ်းလှမ်းရန်သူတို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
အရင်းအမြစ်စာမျက်နှာများလင့်ခ် - သက်ဆိုင်ရာအရင်းအမြစ်စာမျက်နှာများကိုရှာဖွေပြီးတန်ဖိုးကိုထပ်တိုး။ ထိုစာမျက်နှာရှိကျန်ရှိသည့်အရင်းအမြစ်များနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေမည့်အရည်အသွေးရှိသောရင်းမြစ်တစ်ခုကိုကမ်းလှမ်းရန်ကြိုးစားပါ။
Link တည်ဆောက်ခြင်းသည်အချိန်ကုန်သော်လည်းအလွန်တန်ဖိုးရှိနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏အဝေးရောက်နှင့်အတူတကွဖွဲ့စည်းရန်လိုအပ်သည်။
သင်၏လုပ်ငန်းနယ်ပယ်ရှိသြဇာလွှမ်းမိုးသူများ၊ သက်ဆိုင်ရာဘလော့ဂ်များသို့မဟုတ်သင့်ခေါင်းစဉ်ကိုစိတ်ဝင်စားသောပရိသတ်များနှင့်ပင်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ သင်၏အကြောင်းအရာသည်အလွန်အဖိုးတန်နေသရွေ့၎င်းကိုဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့်မြှင့်တင်ခြင်းသည် ၄ ​​င်း၏လက်လှမ်းမီမှုကိုတိုးချဲ့ပြီးသင်၏စီးပွားရေးအတွက် ဦး ဆောင်မှုအသစ်များကိုဆောင်ကြဉ်းပေးလိမ့်မည်။
တစ်ခုခုကိုလမ်း, သင်ရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် သင့်ရဲ့အကြောင်းအရာအတွက်ကောင်းသောမြှင့်တင်ရေးမဟာဗျူဟာ.
သြဇာသက်ရောက်သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်ထိရောက်မှုရှိသည်။ တကယ်တော့, တ ဦး တည်းအစီရင်ခံစာအဘို့အတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် သင်သြဇာညောင်းသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်သင်သုံးစွဲသော $ 1 တိုင်းသင် $ 6.50 ပြန်ရရှိသည်.
ပထမ ဦး စွာသင်သင်၏နယ်ပယ်နှင့်သက်ဆိုင်သောသြဇာသက်ရောက်သူများကိုစာရင်းပြုစုရန်လိုအပ်သည်။ သင်လှုပ်ရှားနေသည့်လှုပ်ရှားမှုကိုပရိသတ်ကိုမောင်းနှင်နိုင်ပြီးသင်၏အမှတ်တံဆိပ်နှင့်သင့်တော်မည်။ သင်အလွယ်တကူလုပ်နိုင်တယ် GroupHigh နှင့်အတူမှန်ကန်သောသြဇာသက်ရောက်ပါစေ.
ထို့နောက်သင်၏စာရင်းကိုအဝေးရောက်ကိရိယာတစ်ခုသို့တင်ပြီးသင်၏စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကိုစတင်နိုင်သည်။ တုန့်ပြန်မှုတစ်ခုရရှိရန်သင်၏အခွင့်အလမ်းများကိုတိုးမြှင့်စေရန်သြဇာသက်ရောက်သူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်သင်၏အီးမေးလ်များကိုတစ် ဦး ချင်းစီစိတ်ကြိုက်သေချာအောင်ပြုလုပ်ပါ။
ပြင်ပအီးမေးလ်အရောင်းအ ၀ ယ်ကိရိယာများသည်အဝေးရောက်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုစီမံရန်အတွက်အလွန်အသုံးဝင်သည်၊ သို့သော်၎င်းတို့သည်သူတို့ဖွံ့ဖြိုးလာသည်နှင့်အမျှသြဇာလွှမ်းမိုးမှုများနှင့်သင်၏ဆက်ဆံရေးကိုအရှိန်အဟုန်မြှင့်ရန်အလွန်တန်ဖိုးရှိသည်။
ဒါပေမယ့်…သင်ရိုက်ကူးမယ့်ပုံပြင်ကိုအမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားလိုတဲ့မှန်ကန်သောအယ်ဒီတာများ၊ သတင်းစာဆရာနှင့်ဘလော့ဂါများကိုပစ်မှတ်ထားရန်လိုအပ်သည်။ ဤအချက်ကအလွန်ထိရောက်သောအဆက်အသွယ်များစာရင်းရှိခြင်း၏အရေးကြီးမှုကိုကျွန်ုပ်တို့အားပြန်လည်ပြောပြသည်။
သင်၏နောက်ဆုံးထုတ်ကုန် / အင်္ဂါရပ် / ဝန်ဆောင်မှုကိုမြှင့်တင်ပါ
နောက်ဆက်တွဲဖြစ်စဉ်ကိုအလိုအလျောက်ပြုလုပ်နိုင်ပြီးလက်ခံသူ၏လုပ်ဆောင်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ ကိုယ်ပိုင်အီးမေးလ်များကိုအစပျိုးနိုင်သည့်ကိရိယာတစ်ခုရှိခြင်းသည်အချိန်ကုန်သက်သာစေသည်။ ဒါ့အပြင်အီးမေးလ်များသို့မဟုတ်အရေးကြီးသောမီဒီယာအဆက်အသွယ်များကိုဘယ်တော့မှမပျောက်နိုင်ပါ။
ပြင်ပအီးမေးလ်အရောင်းအ ၀ ယ် (ဆိုလိုသည်မှာအီးမေးလ်ဖြင့်ဆက်သွယ်ခြင်း) သည်သင်၏အတွင်းမဟာဗျူဟာကိုအထောက်အကူပြုပြီးသင်၏အလုံးစုံစျေးကွက်ရှာဖွေရေးရည်မှန်းချက်ကိုများစွာအထောက်အကူပြုနိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်မရှိသေးလျှင်၊ ဤဆောင်းပါးတွင်ကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သောနည်းဗျူဟာ ၄ ခုသည်သင်၏အဝေးရောက်အစီအစဉ်နှင့်စတင်ရန်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည်။ လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအလိုအလျောက်လွယ်ကူစေရန်၊ ရိုးရှင်းစေရန်နှင့်အရှိန်မြှင့်ရန်အဝေးရောက်ကိရိယာတစ်ခုဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသာလက်နက်ကိုင်ပြီးသင်အားလုံးသတ်မှတ်ထားပါလိမ့်မည်။
“ စစ်အနုပညာ” စစ်ရေးမဟာဗျူဟာများသည်ဈေးကွက်ကိုသိမ်းယူရန်နောက်တစ်လမ်းဖြစ်သည်